Gudd. maxkamada darajada 1-aad ee magaalada Galkacyo oo is-casily. – Radio Daljir
Galkacyo, Jan 29 – C/fitaax Cali Diiriye, guddomiyaha maxkamada darajada 1-aad ee magaalada Galkacyo ayaa ku sifeeyey is-casilaadiisu in ay ku timid duruufo uu sheegay in ay ka jiraan goboolka Mudug, gaar ahaan magaalada Galkacyo oo sheegay in ay eersatay is-casilaadiisu.
Md. Diiriye oo qoraalka is-casilaada ku jiheeyey madaxtooyada Puntland, laguna ogaysiiyey guddoonka maxkamada sare ee Puntland, rafcaanka, iyo xafiiska xeer ilaaliyaha gobolka Mudug ayaan tafaasiil dheeri ah ka bixin duruufaha uu sheegay in ay sababeen is-casilaadiisa.
Md. Diiriye ayaa ka codsaday madaxda uu qoraalkisu khuseeyo in ay tixgaliyaan, aqablaanna codsigiisa.
Is-casilaada gudd. maxkamada darajada 1-aad ee magaalada Galkacyo ayaa la tuhunsan yahay in ay raad ku leedahay dilkii xeer ilaaliyaha maxkamada darajada 1-aad marxuum C/qadaadir Jamac Nugaal, ‘Caato’ oo maalmo ka hor dabley hubaysani ay ku dileen magaalada Galkacyo.
Farxaan J. Cabdulle,